တင်ဆောင်လာသောမိတ်ဆွေမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးအနည်းငယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်သွား၏နာမတော်အားဖြင့်မိခင်နှင့်သားလိင်ဂိမ်းများ။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းစိတ်အားထက်သန်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့အချို့သင်ျလှုပ်ရှားမှုအတွက်၊သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၊အဘယ်သို့သင်လက်ရှိတွင်အတွက်စိတ်ဝင်စားတွေလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီအကြောင်းအရာအလွန်အမျိုးအစားတွေတော့သွားရန်ဝင်ငွေ၊သင်၏မေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်။ ကဲ့သို့သင်ဖြစ်နိုင်ပုံထွက်ရာမှတစ်ဦးတည်းအမည်၊အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကြိုက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒီနေရာမှာပေးသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါလိင်အကြား။, ဤသည်နယ်ပယ်အတော်လေးလူကြိုက်များမှကြွလာသောအခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ကွဲပြားတဲ့မရှိခြင်း၏ရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိချင်တဲ့သူများလူမျိုးအဘို့အနှစ်သက်သောအာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်ပတ်ပတ်လည်ဤအမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်။ အစားကြိုးစားနေ၏အချိုးဖောက်သင်နှင့်အတူတစ်ခုခုအတော်လေးယဉ်နှင့်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးနောက်လူအများကိုခံစားရန်မလိုသောအရာတစ်ခုခုရဲ့အနည်းငယ်ပိုပြီးယုတ်နှင့်ကြမ်းတမ်းသော။, အဘယ်ကြောင့်မိခင်နှင့်သားလိင်ဂိမ်းများတည်ရှိပြီး၊ကျွန်မမျှော်လင့်ကြောင်းပြီးနောက်အချို့သောအချိန်ဖြုန်း၊သင်သည်ကိုယ်အဘို့မြင်သောတာအကောင်းဆုံးအချို့လူတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှကြွလာသောအခါဤအကြောင်းအကြောင်းအရာ၏။ လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ကျနော်တို့လုံးဝချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သင်ျနိုင်ဖြစ်ခြင်းသင်ဖို့ကပေးရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်။ အခြားအရပ်ကလုပ်အားလုံးလည်းရှုပ်ထွေး–ကျွန်မတို့လုပ်ပြီးပြီအားလုံးအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်! ဖတ်အောက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့၏အကျင့်ကိုကျင့်အလုပ်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမှဝင်ရောက်ခွကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများအဖြစ်အဆင်ပြေသောနဲ့ရိုးရိုးတတ်နိုင်သမျှ!
ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကိုပေးကဒီမှာစင်ကြယ်သောမိသားစုသံုးေပျက်စုံလင်။ လျှင်သင်စစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဒေတာဘေ့စပါလိမ့်မယ်၊နှင့်သင်မကြာမီနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သာနယ်ပယ်ပြီဖြစ်ပါတယ်သောသူတယောက်ကိုအင်္ဂါရပ်သားနှင့်၎င်းတို့၏မိခင်ဆင်းရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရန်လိုအပ်သည်င့်သောသူနှစ်ပါးပျော်ရွှင်စေ။ ကျနော်တို့ကြောင်းထင်အချို့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ကြားရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြောင်းထိုလူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူမှာကစားမိသားလိင်ဂိမ်းများပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ! အခုချက်ချင်း၊ကျွန်တော်ထင်တာကဒီဖြစ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးသင်ျခရီးအပြည့်အဝရပ်တန့်မဟုတ်–ကိုယ့်အတွက်အာကာသကြည့်မှာမိခင်များနှင့်၎င်းတို့၏သား။, သင်အလိုရှိသောပြည်တွင်းရှိနက်ရှိုင်းသောဆင်းသင့်နှလုံးကိုအသင့်မေမေပည္ဆိုင္ရာကျော်အားလုံးသင့်ရဲ့ကြီးမားရိုး? အဖေမရှိတော့ပုံမှာအပေါ်၊သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအနိုင်ပေး MILF အပျော်အပါးသူမအလိုဆန္ဒနှင့်ထပ်မံအကြောင်း၊ထိုက်? ကောင်းပြီ၊ကြီးစွာသောအရာကမိခင်နှင့်သားလိင်ဂိမ်းများကျွန်မတို့ဟာအဲဒါကိုသင်ပြမှဖြစ်ပျက်သည့်အခါအဟောင်းတွေအမျိုးသမီးတသို့ရတဲ့စတင်ချုပ်သူတို့၏လိင်ဘဝတွေကိုနှင့်လုလင်၊အကြောအမျိုးသားများနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်သူတို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်သူတို့နှင့်အတူအပျော်အပါးသူတို့အလိုရှိသောကြောင့်။ ယူဖို့အဆင်သင့်သင့်ညမ်းဂိမ္းနောက်အဆင့်မှဤအယူအဆလား။ ထိုအခါယခုမှာထမှတ်ပုံတင်ရန်!
ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ဟုယုံကြည်တဦးကိုပြသဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကျွန်တော်ချစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၏ဧရိယာစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ကောင်းမူမတွေ့မြင်ခဲ့ရသေးပါ။ စဉ်ရှိစေခြင်းငှါတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးအရည်အသွေးကောင်းသင်ျဂိမ်းစျေးကွက်အပေါ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမနိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုင်တစ်ခုဖယောင်းသည်အဘယ်သို့ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ အမြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းလာဤတပ်မက်ဆိုတာကိုကမ္ဘာကိုပြလိုကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိအားလုံး၏ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်လာမည့်မျိုးဆက်ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းပတ်ပတ်လည်အခြေမိခင်နှင့်သားထြင္ခဲ။, အဘယျသို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်ဒီဂိမ်းနယ်ပယ်၊သာနှစ်ဆတိုးပြီးဝင်၌လုံးဝမော်ကွန်းခါဂိမ်းကိုငါတို့သည်သင်တို့အကြည့်အမြင်များပါဝင်ပတ်သက်? ယနေ့တွင်၊ကျနော်ခင်ဗျားကိုပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်အပူဆုံးအချာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္း–မပျင်းရိထိုင်သည့်အခါအမှန်သင်တို့အဘို့အရှိအရှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်ချွတ်!
ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပေးဖူးပါတယ်သင်အနည်းငယ်လျောက်ပတ်ထြင္ခ်င္လာအရာကိုသို့မိခင်နှင့်သားလိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်နှင့်ထပ်မံအကြောင်းထက်၊သင်မွေ့လျော်ကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်အတွင်းပိုထင်ထက်သင်အမှန်တကယ်လိမ့်မည်။ ငါဟောပြော၏ကျန်များအတွက်အဖွဲ့အခါ၊ငါအကြောင်းပြောအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှစီမံခန့်ခွဲလုပ်အတွက်အနည်းငယ်တိုတောင်းသောနှစ်များတိုတောင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်၏မော်ကွန်း၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါသက်သေပြဖို့၌နောက်တဖန်မကျော်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းသည်အမိနှင့်သားသင်ျဂိမ်း၊အကောင်းဆုံးနေရာကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ! သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေအကျိုးအားဖြင့်မှောင်မိုက်ဘက်ခြမ်းနှင့်အမြတ်၏ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများအတွက်ဒီအရူးနယ်ပယ်?, ကောင်းစွာ၊ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်မယ်နှင့်မြင်ရလျှင်မိခင်နှင့်သားလိင်ဂိမ်းများကယ်ယူသောအရာကိုရှိပါတယ်အောင်သင်တဦးတည်းကြောဖောက်သည်!